tondra-drano | GAZETY_ADALADALA
Posted on 20/02/2009 by gazetyavylavitra
Avy tsy mitsahatra ny erika ao an-tokontany ao izao hariva izao. Sady mangatsiaka be ny andro. Manoatra noho ireny andro ririnina ireny. Angamba koa efa zatra ilay hafanana nigaingaina nandritry ny andro vitsivitsy teo aloha teo ny tena.
Efa nalefa ihany moa ny hafatra fa hoe misy andro ratsy miforona any akaikin’ny morontsioraka any amin’izao fotoana (raha tsy efa mandrakotra an’i Madagasikara aza). Ka tany amin’ny faritra Analanjirofo tany izy izay, ary mitondra orana betsaka. Enga anie mba ho hatreo fotsiny ihany ny amin’iny.
Izany rehetra izany dia nanaitra fahatsiarovana tao anatiko.
Herintaona lasa tokoa mantsy izay. 20 febroary toy izao anio izao, ny taona 2008, no namoahako teto amin’ny MalagasyMiray sy tany anatin’ny blaogiko manokana ny momba ny rivodoza IVAN.
Herintaona nahitako izany hoe ranobe nanenika an’Antananarivo, fefiloha vaky. Herintaona nitsidihako ireo tranolain’ny UNICEF teny Anosizato sy ny manodidina azy, nametrahana ireo tra-boina. Herintaona ihany koa tena nandraisako anjara tamin’izany hoe mampita hafatra, na mizara vaovao ho an’ny hafa. Herintaona nahatsiarovako fifaliana tamin’izany hoe mizara izany.
Herintaona toy izao koa anefa, nandritra iny IVAN iny, no nampivarahontsana ahy raha nosimban’ny rivodoza IVAN ny trano teny Ambohimanarina, nefa ankohonana tsy nahita naleha no napetraka tao, ka nitondra aretim-po ho an’ilay ramatoabe, nentiny hatrany am-pasana herinandro vitsy taorian’izay.
Herintaona nifamahofahoan-javatra maro raha fintinina.
Filed under: fiaraha-monina, tapatapany, toetr'andro | Tagged: fahatsiarovana, ivan, rivodoza, tondra-drano |	Leave a comment »
Posted on 20/02/2008 by gazetyavylavitra
Dia tena misy tsy vanombanon-toetra ny olona an! Momba ilay resaka Sainte Marie dia nataon’ny mpanao gazety izay nahitana ny rain’ilay niantso nila vonjy avy any Sainte Marie . Ary isaorana i Fanja Saholiarisoa (www.lexpressmada.com du 20-02-2008 page 7) fa nampitainy ao ny hafatra avy amin’ilay raim-pianakaviana. Toy izao izany hafatra izany « Les personnes ensevelies sous les decombres de l’hotel Antsara à Sainte Marie s(en sont, par contre, sorties saines et sauves« . Toraka voninkazo ho an’i Fanja. Fa ny tena zava-doza tamin’iny lalao ratsy iny dia raha sanatria moa ka mba olona taizan’aretim-po ilay fianakaviana namaky ny LA UNE nilazana ilay vaovao ratsy hoe maty , dia mba ahoana?
Tsy dia hanome tsiny be fahatany anefa aho, satria dimy minitra talohan’ny nanoratako ity dia mbola tsy mety mahazo an’ireo laharana narosoko anao teto, fa tsy misy réseau angamba ny ORANGE any. Raha akapoka izany ny fandehan’ity tantara ity dia io lafiny fifandraisana io no tsy nahafahana nanamarina haingana ny vaovao (raha tsy vao omaly) Izay no tena fositra. Niezaka ihany moa izahay ny nanangona, ary mbola hanangona araka izay azo atao. Fa hatreto aloha izany dia izay ny momba iny resaka iny
Eto dia manolotra fialantsiny betsaka aho ho anareo mpamaky, na izaho izay niandry tamin’ny RNM nandritry ny alina, sy nahita ny lohatenim-baovao vao maraina aza dia mba VOAFITAKA ihany koa. Tohina ka avy hatrany dia nampita taminareo ny vaovao vao mafana. Miala tsiny koa amin’ireo fianakaviana mety ho taitra nahita ity lahatsoratra ity. Tsy namoaka ity mihitsy aho androany raha tsy efa hoe « ny rain’ilay tra-doza mihitsy » no nanamafy ny vaovao tsara. Izay inoako fa dia noho ny fahaizan’ny Malagasy mifanome tanana manoloana ny loza sy antambo toy ireny no naha-avotra azy ireo..
Eto ampamaranana dia tsetsatsetsa tsy aritra ity. Nisy vehivavy teraka tampoka nandritry ny évacuation natao azy, ary dia nomen’ny chef du corps des sapeurs pompiers toro-hevitra ireo raiamandreny mba hahatsiarovana ny andro omaly. Iza hoy ianao no natao anaran’ny zaza : IVAN IKOPA.
Teo koa ny resadresaka fohy nataoko tamin’ireo olona hitako teo anoloan’ny Parking JUMBO SMART. Efa ho tamin’ny roa maraina ny sasany tamin’izy ireo no teo araka ny filazany, ary amin’ny dimy hariva aho no miresaka aminy. « Tsy mbola nisy nijery izahay » hoy izy ireo « ary ny ampitsonay mbola tsy fantatra. Ny fitaovana fiasako sy ny akoho amam-boroko lasan’ny rano any daholo, tsy nahavimbina afa-tsy ny tety an-koditra izahay miampy ireto seau sy vilany kely ireto. Ary lamba firakotra sendra voaramby. Ny ankizy manomboka manavin’ny hatsiaka, ny lehibe efa kodron’ny harerahana. Ny hanina tsy nisy afa-tsy izay natolotr’ireo sendra niantra. Tsy haiko intsony hoe ahoana no mbola hahafahanay miaina aorian’izao. Tsy fantatra izay ny trano na efa nirodana na ahoana fa efa iray metatra amin’ny tafonay sisa tazanay farany tamin’ny fotoana nakan’ny vedette anay tany. Eto (anoloan’ny JUMBO SMART Tanjombato) izahay no mitangorona sy mifampikarakara ambara-pahatongan’ny fanampiana sy ny hoe ho aiza« . Izany no toreo henonao raha nandeha teny an-toerana omaly hariva tamin’ny dimy ora. Ny orana anefa amin’izany tsy mitsahatra ny milatsaka, na dia tsy mivatravatra aza fa mitohy sy mijanona.
Azonao jerena amin’ireto rohy ireto ny herin’ny rano eny an-toerana
Filed under: tapatapany | Tagged: cyclone, Ikopa, inondation, ivan, tondra-drano |	2 Comments »